गोरेटोको खोजीमा : निबन्ध शंकर लामिछाने - खवर संजाल
गोरेटोको खोजीमा : निबन्ध शंकर लामिछाने
- चैत्र ११, २०७७ मा प्रकाशित
मलाई सम्झना आइरहेछ, कसरी म प्रेमपत्रहरु १५-२० पेजको लेख्थेँ । न हात थाक्थ्यो, न मन ! र त्यत्ति लेखिसक्दा पनि लाग्दथ्यो अझ भन्ने कुरा व्यक्त भएको छैन !
व्यक्त गर्ने कुरा नै पाउँदिनँ !
लाग्दछ, के मेरो भण्डार रित्तियो ? वा मेरो सेन्टीविटीमा ठेला पर्‍यो ? होइन, यी कुनै पनि कुरा होइनन्, म यथावत् नै छु भन्ने धारणालाई कुम्लो झैं बोकी मेरो अन्तर्मन विद्रोह गर्न खोज्दछ । म कलम हातमा लिन्छु र कामना गर्न थाल्दछु – यसबाट उच्च साहित्य नै निस्कोस् !
यहीँ, यस चाहनामै, मेरो कमजोरी छिपेको छ । के मैले नै ठेक्का लिएको छु, उच्च साहित्य लेख्ने ? के अरुले उच्च लेखेको उच्च साहित्य होइन ?
र उच्च साहित्य भनेको के हो ?
अब, भो ? शंकर लामिछाने परास्त हुन्छ ।
कारण उसले आजसम्मन् उच्चताको परिभाषा बुझ्न सकेको छैन । शेक्सपियर टाइममा आफ्नी प्रेमिकालाई अर्कोले दृष्टिपात गरेको झझल्कोमै डुएल लडिन्थ्यो । आज चाहिँ स्वास्नीलाई अर्कोले हेरिदिँदा उसको दृष्टिमा फ्रायड देखा परे लोग्नेलाई भरेका लागि खुराक मिल्दछ । यी दुई उच्चतामा, यी दुई महानतामा कत्तिको फरक छ ? २००७ सालको क्रान्ति नभएको भए विजयबहादुर मल्लबाट ‘कालो चश्मा’ सिर्जना हुन सक्थ्यो ? र, २००७ सालको क्रान्ति भइदिएको भए, अघिबाटै ‘दोषी चश्मा’ बन्थ्यो ?
एउटाले पर्खालमा बाटो खोज्यो ।
अर्कोले त्यसैमा गोरेटो पैल्यायो ।
र, मैले बाटो नपाउनुको अर्थ हो, मेरा लागि क्षितिज खुला छ । मेरो लागि अंकमालमा हात फैलिएको छ । आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बढी प्रतिष्ठा पाएकोले नै आज म असहाय भएको छु । अब त, कस्तो हुन लाग्यो भने, एउटा पंक्तिमै ‘वाह वाह’ एउटा लेखमै ‘वाह वाह’ । मानौं पाठकलाई मेरो सफलताको नशा लाग्यो, मानौं मेरो नामको हिप्नेटिज्म वशीवरणले उनीहरुलाई पो छोयो ।
र म ? म चाहिँ विदेशी साहित्य चोर्दछु । विलियम सारोयान पढेँ, मेरो शैली परिमार्जित भयो । हेनरी मिलर पढेँ, लेख्ने कुरामा सत्यवादिताको पुट बढ्यो । एनास निन पढेँ, गद्य काव्यात्मक रुपमा ढाल्न मन लाग्यो । सार्त्र र कामु पढेँ, शून्यवादको अध्ययन गर्न पुगेँ । जेम्स ज्वायस र वाल्डविन पढेँ, ‘के भो के भो, हिजो आज तिम्रै माया लाग्छ !’
शून्यवादले मलाई अन्यवादको भोक बढायो । सांख्यदर्शनदेखि प्रज्ञापारमिता पनि पढ्न पुगेँ । पाएँ, सब माया हो । स्वयंलाई छल्ने उपाय मात्र हो । ईश्वरले हुन सक्छ, सोखका लागि मानिस बनायो; तर, विडम्बना त के भने, मानिसले पूजाका लागि ईश्वर बनाइदियो । सोखका लागि केही गर्नु र श्रद्धाका लागि केही गर्नुमा निकै अन्तर छ । सोखको लागि गरिएका कुरामा आनन्द हामीलाई स्वत: प्राप्त हुन्छ; श्रद्धाको लागि गरिएको कुरामा आनन्द रिटेलरबाट मात्र पुग्न आउँछ हामी कहाँसम्मन् ।
यस कुराको बोध भएपछि सास फेर्दा पनि कफ अड्के जस्तो घ्यार्र-घ्यार्र हुँदो रहेछ । त्यस अवस्थामा कसले भाषण गर्न सक्छ ? कसले कविता गाउन सक्छ ?
कसले कविता लेख्न सक्छ ?
कसले गोरेटो पैलाउन सक्छ ?
तर ‘पर्खालमै तिम्रो बाटो छ !’
कसले भनेको हँ, यो ? नित्सेले ?
म जान्दिनँ, मैले लेखेको यो साहित्य भयो भएन ! तर, असलामा, साहित्यसको परिभाषा नै मलाई थाहा छैन । साहित्य केको लागि ? जनताको लागि ? समाजको लागि ? धर्तीको लागि ? स्वयंको लागि ? वा, आफू मरेर कता कता हिँडिसकेपछि एउटा लाइब्रेरीका दराजबाट धूलोमा बेरिएर एउटा इच्छुकका आँखाको लागि ? वा, कोर्सबुकको लागि ?
यिनै प्रश्नहरुका पर्खालमा म बाटो खोज्दै छु !
सोखको लागि साहित्य अँगालेको भए, अब यो श्रद्धा हुन गयो । आफ्नो लागि देख्न आरम्भ गरेको थिएँ- प्रेमपत्रबाट, हृदयको व्याकुलताबाट, विदेशी-देशी विद्वानको प्रभाव जो परेको थियो आफूउपर, त्यसलाई देशवासीउपर दर्शाउने अभिलाषाबाट, डायरीबाट, अनुभवबाट, ‘वाह वाह-‘ बाट र प्रतिष्ठाको लोभबाट ! आज चाहिँ, म अर्काको लागि लेख्दै छु (रुप-रेखाको सम्पादकको लागि !), जनताको लागि ?, समाजको लागि ?, भविष्यको लागि ?, एक पाठिकाको अस्पष्ट अनुहारको लागि ?
तर, आज साहित्य मेरो लागि सोख रहेन । श्रद्धा हुन गयो । यसैको माध्यमद्वारा म ‘बाँच्छु’ कि भन्ने भावनाले घर बनायो मुटुमा !
(मानौं रोजै पशुपतिनाथ धाइदिँदा, मोक्ष पाइन्छ कि भन्ने भावना !)
र, पर्खालको एक अर्को घेरा हो यो, जसमा म बाटो खोज्दै छु ।
र, जनताको लागि मैले जीवनमा कहिले पनि लेखिनँ !
नाम कमाउन कथा लेखेँ ।
प्रतिष्ठा कमाउन, भविष्यमा बाँच्न यो गोरेटो लेख्दै छु ।
र प्रत्येक लाइन लेख्दा मेरा आँखामा प्रबुद्ध अनुहार नै आए । यस्ता अनुहार जसलाई म रुचाउँछु वा जस्तो अनुहार वृद्धि होस् भन्ने कल्पना गर्छु । आमाको अनुहार, मास्टरको अनुहार, प्रेमिकाको अनुहार, साहूको अनुहार, जागिरको अनुहार, इज्जतको अनुहार, प्रतिष्ठाको अनुहार ।
‘हेर, हेर, कान्छा बाख्री !’ भन्ने अनुहार होइन- जो उत्तर दुई नम्बरबाट काठमाडौं ओर्लेर नयाँ सडकमा, नयाँ सडकमा, नेपाल आर्ट एन्ड हैन्डिक्राफ्ट सेन्टरको शो-विन्डोमा राखेको सानो याक देखेर कराउँछ ।
हो, ती जनता हुन् । र तिनलाई मैले माया नगरेको, घृणा गरेको होइन ! (दैव जान्दछ, म अर्को जुनीमा यहीँ जन्मूँ- यो मेरो आन्तरिक अभिलाषा छ !) तापनि म तिनका लागि साहित्य लेख्दिनँ । तिनको लागि लेखिएको कुरा शिक्षा-सामग्री हो- साहित्य होइन । (र शिक्षा-सामग्री मैले नलेखेको पनि होइन र नछापेको पनि होइनन्, र तिनको नामकरण ‘हाम्रो साहित्य’ नभएको पनि होइन !!)
तथापि, म बालमुकुन्द र उत्तमको लागि लेख्छु, भूपी शेरचनको लागि लेख्छु, पारिजातको लागि लेख्छु, भीमदर्शन रोकाको लागि लेख्छु, कैयन् नजन्मेका अनुहारको लागि लेख्छु- यस्ता अनुहार जो शून्यवाद बुझ्दछन्, जो याक र भेडाको अन्तर थाहा पाउँछन्, जो होनोलुलु सम्मेलनको विश्वव्यापी प्रतिक्रिया अठोट गर्ने दुस्साहस राख्दछन् ।
मैले रचना गरेका साहित्यमा स्वदेशीपन छैन । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बीज अंकुरित भएको छ । त्यसमा सार्त्र र सारोयान, जायस र जिल्ड, मिलर र मोराँक, जेनेड र दर्जाइको वीर्य मिसिएको छ । त्यफ वर्ण-संकर हो । तापनि, म गर्वसाथ भन्ने साहस गर्छु, त्यो नेपाली हो, कारण त्यो मेरो गर्भमा अंकुरित भएको छ ।
र मेरो गर्भको विश्वरुपको रुप हो ।
त्यसमा करोडौं ओभम् छन् ।
त्यसमा करोडौं स्पर्माटोजोआ छन् ।
कहिले कसैको ओभम-शैलीसँग कसैको स्पर्म-विचार जोल्टिन पुग्छ । कहिले कसैको स्पर्म-शैलीसँग अर्कोको दर्शन ओभम् । यही गर्भको पाठेघर बीचम म जन्मिने उपाय खोज्दै छु ।
त्यही पर्खालभित्र मेरो ढोका छ ।
त्यही बाटो नभएको अन्योलमा मेरो गोरेटो छ ।
र त्यही गोरेटोमा मेरो भविष्यको राजमार्ग छ ।
(एब्सट्राक्ट चिन्तन: प्याज निबन्धसंग्रह (०२४) बाट साभार ।